WARBIXIN:- Xiisad kacsanaan oo aan caadi ahayn oo ka dhex dilaacay maamulada Puntland iyo Galmudug - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
WARBIXIN:- Xiisad kacsanaan oo aan caadi ahayn oo ka dhex dilaacay maamulada Puntland iyo Galmudug
Xiisad kacsanaan ah ayaa ka dhex dilaacay maamulada Puntland iyo Galmudug kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo geysay garoonka diyaaradaha C/laahi Yuusuf oo ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Uljeedka ciidamadaan loo yaqaano DANAB ee la geeyay Gaalkacyo ayaa waxaa kasoo baxaaya warar is khilaafsan, waxaana howlgal ciidamadaasi ka sameeyeen guryo ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ay guryahooda kala baxeen dad dhowr ah, taasoo keentay inay qeylo dhaan soo saaraan maamulka koonfurta Gaalkacyo ee maamulkeedu gacanta ku haysa Galmudug.
Duqa koonfurta magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo gelinkii dambe warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidankaasi la geeyay magaalada Gaalkacyo ay la socdeen ciidanka PIS-ta ee Puntland iyo saraakiil Mareykan ah ay odayaal dhaqameedyo ka afduubteen dhinaca koofureed ee magaalada Gaalkacyo oo ay maamusho Galmudug.
Wuxuu Xirsi Yuusuf sidoo kale sheegay in talaabada ay ciidamadaasi ku galeen dhinacdooda ay si weyn uga soo horjeedaan, islamarkaana tilmaamay in dowladda federaalka aysan wax xiriir ah lasoo sameynin maamulkooda, ayna khalad tahay in warbixin laga qaatay hal dhinac lagu howlgalo.
Dhinaca kale, duqa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland Maxamed Yaasiin Tumay ayaa isna laga soo xigtay in ciidamada DANAB ee tagay garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo ay ka qeyb qaadanayaan sugitaanka ammaanka ee magaalada Gaalkacyo labadeeda dhinac, isla markaana ay la shaqeynayaan ciidamada Puntland.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqata in dhinaca maamulka Puntland ay ka war hayaan, lana socdaan howsha ciidamada tagay magaalada Gaalkacyo, halka Galmudug ay ku soo baraarugtay markii dhinaceeda howlgal ay ka fuliyeen ciidamada Kumaandooska Soomaaliya oo Galmudug ku eedeyneyso inay Puntland la safteen.